विवाद – Himalaya Television
प्रदेश १ : नाममा दलीय विवाद (भिडियो रिपोर्टसहित)
४ माघ २०७८ विराटनगर । नेपाल संघीय संरचनामा गएपछि बनेका सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ ले नाम राख्न बाँकी छ । सोमबार प्रदेश २ ले नाम र स्थायी राजधानी टुंग्याएपछि प्रदेश १ मात्र बेनामे बनेको छ । प्रदेश १ ले...
भारत भ्रमणका क्रममा देउवाले उठाउलान् त सीमा विवादको विषय ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
२१ पुस २०७८ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा यही पुस २५ गते भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । आफ्नो नयाँ कार्यकालमा पहिलोपटक भारत भ्रमण गर्न लागेका देउवाले समकक्षी मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत तय भएको छ...
ठेकेदारको लापरबाही र विवादका कारण सडक विस्तार सुस्त (भिडियो रिपोर्टसहित)
१७ पुस २०७८ विराटनगर । विराटनगरको रानीदेखि सुनसरी धरानसम्मको छ लेन सडक दुई वर्ष अघि नै निर्माण सम्पन्न हुनपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म करीब ६० प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको छ । यसरी समयमै काम पूरा नहुनुको मुख्य कारण,...
माधव समूह पार्टी छोडेर गए पनि एमालेमा रोकिएन विवाद (भिडियो रिपोर्टसहित)
२३ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टी छोडेर गए पनि नेकपा एमालेमा विवाद रोकिएको छैन । महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको एमालेमा दश बुँदे कार्यान्वयनकै विषय विवादमा छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दश बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा इमान्दार...
पूर्णता नपाउँदै विवादमा राजनीतिक संयन्त्र (भिडियो रिपोर्टसहित)
२३ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारका कामलाई प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउन ११ सदस्यीय समन्वय समिति गठन गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भन्दै आउनुभएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रकै रुपमा यो समितिले काम गर्ने आशय राखिएको...
न्यायालय विवाद : सेवाग्राही मर्कामा, अबको निकास के ?
१६ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शर जबरालाई लिएर शुरु भएको न्यायालयको विवाद थप लम्बिने भएको छ । तिहार शुरु भएको र अझै पनि सहमतिको कुनै संभावना नदेखिएकाले यो विवाद तिहार पछिसम्म जाने निश्चित छ । लामो समय...
१४ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । न्यायालयमा प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको बहिर्गमनका लागि आवाज मात्र उठेको छैन, उहाँले मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्नेमा करिब एकमत छ । उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिँदा महाअभियोग मात्र विकल्प हो । तर राणाले भाग पुर्‍याइदिएको र...
विवेकशीलमा विवाद बढ्दो, मिश्रको दस्तावेज खारेज
१२ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे समूहले अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको राजनीतिक दस्तावेज खारेज गरेको छ । पाण्डे समूहको आज बसेको बैठकले पार्टी अध्यक्ष मिश्रले प्रस्ताव गरेको दस्तावेज वैकल्पिक राजनीतिको आशय र मर्मविपरीत भएको निष्कर्ष...
विवादमा परेका प्रधानन्यायाधीशमाथि राजीनामाकाे दबाब (भिडियो रिपोर्टसहित)
८ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भागबण्डा खोजेपछि विवादको घेरामा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा पछिल्लो समय थुप्रै प्रकरणको जालोभित्र बेरिँदै जानु भएको छ । सत्ता गठबन्धनसँग मन्त्रीमा भाग खोजेपछि बढेको उहाँविरुद्धको आलोचनाको शिलशिला अहिले इजलाश गठनमा अनियमितता,...
एमालेमा यसरी बल्झियो विवाद
६ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । पार्टीको आधार संगठन मानिने वडाको अधिवेशन शुरु हुने एक दिनअघि एमाले बैठकमा पार्टीको विवाद बल्झिएको छ । स्थायी कमिटीको हिजोको बैठकमा १० बुँदे सहमति गर्नेमध्येका एक उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका...